इजकिएल 32 ERV-NE - फिराऊन एउटा - Bible Gateway
फिराऊन एउटा सिंह या दैंत्य?
32 देशबाट निकालिएको बाह्रौं बर्षको बाह्रौं महीनाको पहिलो दिन परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो,2“हे मानिसको छोरो! फिराऊन मिश्रको राजाको विषयमा यो दु:खको गीत गाऊ। उनलाई भन:
“‘तिमीले सोचेको थियौ तिमी शक्तिशाली जवान सिंह हौ,
घमण्डसँग देशहरूमा घुम्दै थियौ,
तर साँच्चै तिमी एक अजिङ्गर जस्तै हौ,
तिमी पानीको प्रवाहलाई ठेल्दै बाटो बनाउँछौ,
अनि आफ्नो खुट्टाले पानी छ्याप्दै,
नदीहरू माटै-माटो बनायौ।
तिमीले मिश्रको नदीहरूलाई उत्तेजित पार्यौ।’”
3 परमप्रभु मेरा मालिक यी कुराहरू भन्नुहुन्छ:
“मैले धेरै मानिसहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा पारेकोछु।
अब म तिमीमाथि आफ्नो जाल फिँजाउँछु।
त्यसपछि तिनीहरूले तिमीलाई तान्नेछन्।
4 त्यसपछि तिमीलाई सुख्खा जमीनमा झारिदिन्छु!
म तिमीलाई खेतमा फ्याँकिदिन्छु।
तिमीलाई खानका निम्ति म सबै पंक्षीहरू बोलाउँछु।
म प्रत्येक ठाँउबाट जङ्गली पशुहरू तिमीलाई खान,
अनि पेट भर्नका निम्ति बोलाउँछु।
5 म तिम्रो शरीरलाई पर्वतमाथि तितर-बितर पार्छु।
म तिम्रो लाशले बेंसीहरू भरिदिन्छु।
6 म तिम्रो रगतले पहाड भिजाउँनेछु
अनि भूमिमा सोसाउँछु।
अनि खोला नालाहरू पनि त्यसैले भरिनेछन्।
7 म तिमालाई लोप गराइदिन्छु म आकाशलाई छोपिदिन्छु
अनि ताराहरूलाई अँध्यारो पारिदिन्छु।
म सूर्यलाई बादलले ढाकिदिन्छु,
अनि चन्द्रमा चम्किने छैन।
8 म सबै चम्किने ज्योतिहरूलाई,
आकाशमा तिमीमाथि कालो बनाई दिन्छु।
म तिम्रो सबै देशमा अँध्यारो पारिदिन्छु।”
परमप्रभु मेरा मालिक भन्नुहुन्छ।
9 “अनि जब म तिमी टुक्रिएका टुक्राहरू अन्य राष्ट्रहरू र देशहरूमा ल्याउनेछु जुन तिमी चिन्दैनौ, धैरे मानिसहरूको हृदयमा कष्ट पुराइदिनेछु। 10 म धेरै मानिसहरलाई तिम्रा विषयमा चकित पार्नेछु। तिनीहरूका राजा त्यस समय तिम्रो निम्ति भयभीत हुनेछन्, किनभने जब म उनको सामन्नेमा आफ्नो तरवार चलाउँछु दिनको प्रत्येक क्षणमा जब तिमी तल जान्छौ राजा डरले काम्नेछ। प्रत्येक राजा आफ्नो जीवनको निम्ति डराउनेछ।”
11 किनकि परमप्रभु मेरा मालिक यसो भन्नुहुन्छ “बाबेलको राजाको तरवार तिम्रो विरूद्धमा युद्ध गर्नु आउँछ। 12 म ती सैनिकहरूको उपयोग गरेर तिम्रो मानिसहरूलाई युद्धमा मार्न लगाउँनेछु। ती सैनिकहरू देशमा सबै भन्दा डरलाग्दा देशहरूबाट आएको हुनेछन्। तिनीहरूले मिश्रको त्यो चीजहरूलाई नष्ट गरिदिनेछन् जसको घमण्ड मिश्रले गर्छ। मिश्रका मानिसहरूलाई नष्ट गरिदिइनेछ। 13 मिश्रका नदीहरूको किनारमा धेरै पशुहरूछन्। म ती पशुहरूलाई पनि नष्ट गरिदिन्छु। मानिसहरूले भविष्यमा आफ्नो खुट्टाले पानी मैला पार्नेछैनन्। 14 यस्तो प्रकारले म मिश्रको पानीलाई शान्त बनाइदिन्छु, म त्यसको नदीहरूलाई मन्द गति बगाउँनेछु, त्यो तेल जस्तै बग्ने छ।” परमप्रभु मेरो मालिकले यसो भन्नुभयो, 15 “म मिश्र देशलाई रित्तो बनाइदिन्छु, त्यसले प्रत्येक चीज हराउनेछ। म मिश्रमा बस्ने सबैलाई दण्ड दिन्छु। त्यसपछि तिनीहरूले थाहा पाउँनेछन् कि म नै परमप्रभु अनि मालिक हुँ!
16 “यो एउटा विलापको गीत हो, जुन मानिसहरूले मिश्रका निम्ति गाउँछन्। अर्को देशहरूका छोरीहरूले (शहरहरू) मिश्रको विषयमा यो दु:खको गीत गाउनेछन्। तिनीहरूले यो मिश्र अनि त्यसको सबै मानिसहरूको विषयमा दु:खको गीत गाउँनेछन्।” परमप्रभु मेरो मालिकले यी सबै कुराहरू भन्नुभयो।
मिश्र देश नष्ट पारिनेछ
17 देशबाट निकालिएको बाह्रौं बर्षमा त्यही महीनाको पन्ध्रौं दिनमा परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 18 “हे मानिसको छोरो, मिश्रका मानिसहरूका निम्ति रोऊ। मिश्र अनि ती छोरीहरूलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट चिहान सम्म पुर्याऊ। तिनीहरूलाई खाल्डोमा लैजाऊ जहाँ तिनीहरू ती मानिसहरूसित सम्मलित हुन्छ जो पहिले नै खाल्डामा गइसकेकाछन्।
20 “मिश्रलाई ती अरूहरू सबै मानिसहरूसँग जानुपर्छ जुन युद्धमा मारिएका थिए। शत्रुले ऊ अनि उसका मानिसहरूलाई टाडा तानेर लगे।
22-23 “अश्शूर अनि त्यसको सबै सेना मृत्युको ठाँउमा छन्। अश्शूरका ती सबै सैनिकहरू युद्धमा मरिएका थिए। तिनीहरूको चिहान अरूको चिहान वरिपरि छन्। तिनीहरूको चिहानहरू अत्यन्तै गहिरो खाडल भित्र छन्। अश्शूरका सबै सेनाहरू युद्धमा मारिएका थिए। अनि तिनीहरूको चिहानहरू उसको चिहानको चारैतिर छन्। जब तिनीहरू जीवित थिए तिनीहरूले मानिसहरूलाई भयभीत पार्थे।
24 “एलाम त्यहाँ छ अनि उसका सबै सेनाहरू उसको चिहानको चारैतिर छन्। तिनीहरू सबै युद्धमा मारिएका थिए। ती बेखतने मानिसहरू पृथ्वीको गहिरो भागमा गए। जब तिनीहरू जीवित थिए तिनीहरूले मानिसहरूलाई भयभीत पार्थे। तर तिनीहरूले तिनीहरूको लाज तिनीहरूसितै लिए र गहिरो खाडल भित्र गए। 25 तिनीहरूले एलाम र उसका सैनिकहरूका निम्ति ओछ्यान लगाइ दिए जो युद्धमा मारिए। एलामका सबै मानिसहरू उसको चिहानको वरिपरि छन्। सबै खतना नभएकाहरू जो युद्धमा मारिए जब तिनीहरू जीवित थिए तिनीहरूले मानिसहरूलाई भएभीत बनाए। तर अहिले तिनीहरू जालसित तल गहिरो खाल्डाभित्र गए। तिनीहरूलाई जो पहिले मारिएका थिए तिनीहरूसितै राखियो।
26 “मेशेक, तूबल अनि त्यसको सम्पूर्ण सेनाहरू त्यहाँ छन्। तिनीहरूको चिहानहरू चारैतिर छन्। यी बेखतनाहरू सबै युद्धमा मारिएका थिए। जब यिनीहरू जीवित थिए तिनीहरूले मानिसहरूलाई भयभीत पार्थे। 27 तर अब तिनीहरू धेरै अघि मारिएका शक्तिशाली मानिसहरूसित लडिरहेका छन्। तिनीहरू आफ्नो आफ्नो युद्धको हतियारहरूसितै गाडिएका छन। तिनीहरूको टाउको मुनि तिनीहरूका तरवारहरू राखिएको छन्। तर तिनीहरूको पापले तिनीहरूको हड्डी ढाकेको छ। किनभने जब तिनीहरू जीवित थिए तिनीहरूले मानिसहरूलाई आतंकित पार्थे।
28 “मिश्र! तिमी पनि नष्ट हुनेछौ। तिमी ती बेखतनेहरूसँग पसारिने छौ। तिमी ती सैनिकहरूसँग सुत्दैछौ जो युद्धमा मारिएका छन्।